उचाइ मापन गर्न गएको टोली सगरमाथा चुचुरोमा - Sabal Post
सबिता शर्मा / काठमाडौं – सगरमाथा मापनका लागि चढेको नापी विभागको प्राविधिक टोली बुधबार बिहान ३.०० बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको छ । मङ्गलवार दिउँसो १ः४५ मा उक्त टोली साउथ कोलबाट चुचुरोतर्फ लागेको थियो । नापी विभागका सगरमाथा उचाई मापन सचिवालयका प्रमुख सुशील डंगोलले टोलीले चुचुरोमा पुग्यौं भन्नेसम्मको खबर गरेको र त्यसपछि थप सूचना भने आइनसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मङ्गलवार विहान पुग्ने अनुमान गरिएकोमा मौसम अनुकूल नभएपछि सोमवारदेखि सगरमाथाको साउथ कोलमा पुगेर टोलीले विश्राम गरेको थियो । शुक्रवार राति आधार शिविरबाट नापी विभागका प्राविधिक खिमलाल गौतमको नेतृत्वमा चारजनाको टोली चुचुरोमा पुगेको हो ।
सगरमाथा मापनका लागि जि एन एस एस रिसिभर र जि. पि.आर. मेसिन चुचुरोमा लगिएको थियो । मेसिनसहित चुचरोमा पुगेको टोली र नियन्त्रण बिन्दुमा रहने प्राविधिकबीच एउटै समयमा सगमाथा अवस्थित जमिनको सतहमा आठवटा नियन्त्रण बिन्दुमा पनि प्रावधिकबीच सम्पर्क गर्नुपर्ने थियो । तल र माथि सम्पर्क भए नभएको पनि स्पष्ट सूचना आइसकेको छैन । नियन्त्रण विन्दुमा भएका प्राविधिक र चुचुरोमा भएकाबीच स्याटेलाइटबाट सूचना आदानप्रदान र सम्पर्क हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट पहिलोपटक सगरमाथाको उचाई मापन गरिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस गुल्मीद्धारा अन्याय,अत्याचार ,भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियान…
ॐ उच्चारणले दिन्छ यस्ता रोगबाट मुक्ति
बेहुला झै पञ्चेबाजा घन्काएर रबीलाई एयरपोर्टमा स्वागत…
सीमा अतिक्रमणका बिरुद्ध छैठौँको बिरोध सभा
सैनामैनाका सामुदायिक विद्यालय प्रविधिमैत्री बन्दै
उप–मेयर कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि कुँवरवर्तीलाई